Faa'iidooyinka xarig boodka. Wax walba ka ogow | Ragga Stylish
Faa'iidooyinka xarig boodka
Xaqiiqdii waxaad ku aragtay dad badan qolkaaga jimicsiga kuwaas oo, inta lagu jiro marxaladda qeexitaanka muruqyada, ka dib jadwalka miisaanka kadib waxay u boodaan xarig. Xadhig ka boodka ma aha wax lagu qabtay ardaaga dugsiga oo keliya, laakiin wuxuu leeyahay faa'iidooyin caafimaad oo aad u weyn. Faa'iidooyinka ugu waaweyn ee aan aragno waxaa ka mid ah miisaanka oo yaraada iyo bixinta murqaha oogada.
Qodobkaan waxaan diirada ku saareynaa sharaxaadda kuwa ugu waaweyn Faa'iidooyinka xarig boodka maxaase cillado ah.
1 Faa'iidooyinka xarig boodka si loo hagaajiyo qeexitaanka murqaha
2 Adag iyo adkaysi
3 Tilmaamaha si loo helo dhammaan faa'iidooyinka xadhig boodka
Faa'iidooyinka xarig boodka si loo hagaajiyo qeexitaanka murqaha
Markaan galno marxaladda qeexitaanka muruqyada yoolkayagu ugu weyni waa dufanka oo dhinta. Inta lagu jiro marxaladan qeexitaanka waa inaan ilaalino yaraanta kalooriga ee ka caawisa kor u qaadista dufankalaakiin laakiin, markeeda, waa inaan dammaanad qaadnaa dayactirka muruqyada. Si tan loo sameeyo, waxaan u baahanahay inaan dhisno yaraanta tamarta maalinlaha ah ee sii socota taas oo naga caawinaysa inaan lumino dufanka si tartiib tartiib ah.
Tababbarka culeyska ayaa wali ah mid aasaasi ah sida ay ugu jirto marxaladda koritaanka murqaha. Waa sababta aan u siineyno jirkeena inuu awood u yeesho inuu ilaaliyo murqaha inta aan ku jirno tamar yaraanta. Xadhig boodka ayaa yeelan kara waxtarro sida gubidda kalooriyada dheeraadka ah inta lagu jiro tababarka. Waa jimicsi aad u xiiso badan oo wanaagsan oo loogu talagalay caafimaadka wadnaheena kaas oo u rogaya iska caabbinta muruqyadeena, iska caabbinta wadnaha iyo neefsashada.
Waxaa jira dadka qaar, gaar ahaan kuwa cusub, oo waliba Waxay ku helayaan xoogaa murqo ah jimicsi joogto ah. Faa'iidooyinka ugu waaweyn ee laga helo boodboodka xariggu waa in ay isla muruqyada jirka oo dhan isla mar wada shaqeyso. Qaybta kore ee jirka waxaan ku leenahay dhaqdhaqaaq wareeg ah oo xarig ah oo u baahan dadaal labada gacmood, garbaha iyo qeybaha sare ah.
Dhanka kale, jirka hoose waa inaan si isdaba joog ah ugu boodno waqti ka badan ama ka yar oo muruq jaban ayaa la aasaasay. Ku celcelintaas, weyluhu waxay u shaqeeyaan inay dammaanad qaadaan barkinta wanaagsan mar kasta oo caarada cagtu dhulka ku dhacdo. Muruqyada si joogto ah ayey u xasilinayaan oo laga yaabaa inay xoogaa xoogaa murqo yeeshaan sida baruur ayaa luntay.
Sida qaybta caloosha, waxaan u aragnaa baahida loo qabo in la qaato meel wanaagsan si aan u awoodno inaan ilaalino dheelitirka inta lagu gudajiro layligan. Tani waa sida tartiib tartiib ah aad u awoodi doontaa inaad qaabeyso calooshaada adigoo yareynaya dhexroorka dhexdaada.
Adag iyo adkaysi
Kaliya faa iido uma leh dadkaas kuwaa oo ku jira marxalad lumis dufan laakiin sidoo kale kuwa doonaya inay kordhiyaan waxqabadkooda isboorti. Xadhiguna waa mid ka mid ah astaamaha jimicsiga ee ka caawiya in la gubo kalooriyaal badan halkii unug ee waqtiga.Waa waxqabad aad u sarreeya oo jidhku u baahan yahay inuu u isticmaalo tiro badan oo keyd tamar ah si uu u fuliyo.
Tababbarka joogtada ah wuxuu siiyaa faa'iidooyin wanaagsan xargaha boodboodka marka loo eego cellulite. Maaddaama aan si isdaba joog ah ugu boodno, unugyada muruqyada waxay marayaan nooc duugis ah oo dhiirrigeliya wareegga dhiigga isla markaana ka hortaga muuqaalka xididdada dhiigga iyo dhibaatooyinka xididka
Xadhig boodka ayaa gubi kara kalooriyeyaasha la midka ah saacad ku socota xawaare dhexdhexaad ah. Taasi waa, qofka culeyskiisu yahay 60 kiilo, waxay gubi kartaa qiyaastii 700 oo kaloori saacaddii.
Kasbashada firfircoonidu sidoo kale waa mid ka mid ah faa'iidooyinka xadhig boodka. Waana in bilowga aysan sahlaneyn in la isku duwo gacmaha, cagaha iyo in la boodo, markiisa, waqtiga saxda ah. Waqtiga aad dhaafto iyo hagaajinta ficil ahaan, waxaad jimicsigan ku sameyn kartaa tayo aad u fiican, sidaas darteedna waxaad ku horumarin kartaa firfircoonaantaada. Waxaad sidoo kale ka shaqeysaa qaadashada wacyiga jirka si aad u awoodo inaad kordhiso dheecaanka iyo iswaafajinta dhaqdhaqaaqaaga.
Khibrad aad u badan oo aad ku leedahay noocyadan jimicsi, wax badan ayaad ku hagaajin kartaa booskaaga iyo dheelitirkaaga.
Tilmaamaha si loo helo dhammaan faa'iidooyinka xadhig boodka
Kuma filna in xadhiga la qabsado oo loo boodboodo sidii waalan. Waxaa lagama maarmaan ah in farsamada si wanaagsan loo qabto si loo hagaajiyo natiijooyinka. Marka xigta, waxaan qori doonnaa taxane taxane ah si aan u awoodno inaan helno dhammaan faa'iidooyinka xargaha boodka oo aan ka fogaanno dhaawacyada suuragalka ah:
Dhererka xariggu waa inuu noqdaa mid ku filan. Si loo ogaado haddii xadhigani yahay kan la jaanqaadaya dhererkaaga, waxaannu hal lug gelin doonaa dhexda xarigga. Qabashada waa inay gaaraan dhererka garabka. Tani waa sida aan u hubinno in dhererka xariggu ku filan yahay dhererkeenna.
Waa inaan nafteena dhignaa muuqaal wanaagsan. Taasi waa, miskaha waa inuu ahaado mid adag oo lugaha wax yar ka laaban yihiin laabatooyinka cagaha. Sidan oo kale, waxaan iska ilaalinaa kordhinta waxtarka leh ee jilbaha.
Kuwa kaliya ee masuulka ka ah dhaqaajinta xadhkaha waa curcurada. Waa in aynaan ku dhaqaaqin gacmaha. Waxaan kaliya leexin doonnaa dhaqdhaqaaqa iyo culeysyada muruqyada.
Waa inaad mudnaanta siisaa qaadashada boodbooyin yaryar kahor boodbooyin waaweyn. Tani waa sida aan u dammaanad qaadno inaan jimicsi ku sameyn karno muddo dheer si aan u gubno kalooriye weyn. Boorsooyinka waaweyn waxaad ku daashaa dhaqso waxaadna waayi kartaa dheelitirkaaga.
Si aan ugu darno xoogaa jimicsi, waxaan qaadan karnaa qaar ka mid ah xargaha boodboodka oo haysta culeysyo culus ama anqawyo culus.
Qaar ka mid ah cilladaha jimicsiga noocan ah ayaa ah inay saameyn xoog leh ku leedahay marka ay timaaddo inay saameyn ku yeelato kala-goysyadayada. Tani waxay aakhirka sababi kartaa inaan dhaawacno qaybta lugaha, gaar ahaan jilbaha ama miskaha. Waa lagama maarmaan in la xidho kabo soo jiidan kara saameynta.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto waxtarrada kala duwan ee xargaha boodka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Fitness » Faa'iidooyinka xarig boodka
Cabitaano caafimaad leh
Cunto jilicsan oo loogu talagalay caloosha